Faa’iidada caafimaadka ee Bas_baaska – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Faa’iidada caafimaadka ee Bas_baaska
Faa’iidada caafimaadka ee Bas_baaska
Bas-baaska wuxu qani kuyahay oo aad ugu badan #vitamin C taas oo kadhigan
100 gram oo bas-baas ah waxa kujiro Vitamin C = 144 milligrams oo u dhiganto 173% xaddiga vitamin C jirku ubaahanyahay maalintii : Reference Daily Intake (RDI)
Sidoo kale waxa kujiro fiitamiin B6 = 0.51 mg u dhiganto 40% (RDI)
Iyo macdanta = Iro , Magnesium , Potassium
Kasakow inay jirto fikrado ah in bas-baasku uu ka qayn qaato gaas-calooleedka iyo laab-jeexa/ laab-hurka maado kujirto bas-baaska oo layiraah #capsaicin waxay keentaa dareen ah hur/gubasho sidoo kale maadada #capsaicin waxay keentaa in calooshu soo dayso aashito (acid) badan taas oo keeni karto gaas-calooleed
taas kacsigeeda fiitamiinada muhiimkaa ee kujiro bas-baaska waxay kaq ayb qaadan karaan in difaaca jirku la dagaalamo wax yaalaha ilmo aragtada ah sida bakteriyada keento gaas-calooleedka ee layiraah H. pylori
Wuxu xoojiyaa #dhifaaca jirka = xaddiga aadka ubadan ee vitamin C kujiro wuxu sare uqaadaa difaaca jirka (immunity system) arintaas oo aad ugu muhiimsan wakhtiya uu dilaaco virus-ku .
wuxu la dagaalamaa #caabuqa iyo #infekshanka ,khaasatan kuwa ku dhaco Neef-mareenka /sanbabada : xaddiga aadka ubadan ee kujiro fiitamiin C sidoo kali fiitamiin A (beta-Carotene) waa antionxydant tasoo macnaheedu yahay wuxu ladagaalamaa oo jirka kasaara waxyaalaha sunta ah ee kadhasho falgalada khaldan ee ka dhexdhaco jirka .
Wuxu u fiicanyahay #dheef_shiidka : maadada fiitamiin B6 ee ku jirto waxay ka qayb qaadataa burburinta iyo dheef shiidida cuntada .
yareynta #miisaanka jirka : maadada capsaicin cilmi-baaris caafimaad ayaa sheegayso inay hoos u dhigto miisaanka.
5.wuxu u fiicanyahay #maqaarka : vitamin C wuxuu caawiyaa samaysanka collagen oo ka qayb qaadato samaysan iyo bad qabka maqaarka .
wuxu horu mariyaa caafimaadka #maskaxda iyo shaqada neerfaha : wax kujiro Vitamin B6 oo ka qayb qaato samaaynta fariin sidayaasha neerfaha sida serotonin iyo gamma aminobutyric acid .
Waxa lagu taliyaa inaysan isticmaalin bas-baadka dadka qabo gaas-calooleedka iyo laab-jeexa/hurka
Like dheh page-ka #Caafimaadka iyo #Nafaqada
Previous articleMasar oo xaqiijisay in 85 Dhimasho ah covid19 maalin kaliya